Jery todika 2015 : nolalovan-drahona ny kolontsaina malagasy | NewsMada
Jery todika 2015 : nolalovan-drahona ny kolontsaina malagasy
Fahombiazana ? Tsy fahombiazana ? Nety ? Tsy nety ?… Samy niezaka nanamarina ireo avokoa ny zava-nisy niainan’ny kolontsaina malagasy nandritra iny taona 2015 iny. Niraisana kosa ny alahelo tamin’ny tranga sasany.
Nilaozan’ny feomanga ny hira malagasy ! Gina tanteraka ireo rehetra nahare fa nindaosin’ny fahafatesana tany Antsirabe i Andriamahatana Ridasoa na i Rida, mpikambana ao amin’ny tarika Ny Railovy, ny 11 marsa. Andro vitsy monja taorian’ny nanatanterahana ilay fampisehoana niarahana tamin’ity tarika manana ny maha izy azy ity, tetsy amin’ny CCEsca Antanimena. Ankoatra ny Ny Railovy, nametrahany ny talentany ihany koa ny tarika Hobio. Nifanaretsaka teny am-bavan’ny Malagasy maro ny fanontaniana. Misarintsarina fanahiana ny ankamaroan’izy ireny. Iza ny handimby an’i Rida ? Hanao ahoana ny hoavin’ny tarika Ny Railovy ? Ny hoavin’ny karazan-kira tahaka io ataon’ny tarika io ?… Nipoitra ireny fanontaniana ireny noho ny fahalalana fa olon’ny kolontsaina feno i Rida. Mpanentana, mpanetsiketsika, havanana amin’ny haingon-tsehatra, mahay miteny, sns.
Nivarahontsana ny rehetra raha nahare fa nodimandry tampoka Ratovoherinirina Michel, fantatry amin’ny anarana Ramika. Fahafatesana vokatry ny tsindron’antsy nahazo azy ny harivan’ny 23 oktobra, tetsy Andravoahangy Ambony. Andrarezina teo amin’ny fanaovana tantara an-tsary Ramika. Sehatra maro no efa nahatazanana azy sy ny sanganasany. Anisan’ireny ireo gazety mivoaka isan’andro, sary fanentanana isan-karazany. Marobe ireo sekoly nampianarany sary. Zaza sy tanora ary olon-dehibe maro nanovo fahalalana taminy. Fahatsorana, toetra nampiavaka azy teo anivon’ny fiarahamonina.
Fikambanana ivondronana mpanao tantara an-tsary maro no nahitana azy. Anisan’ireny ny « Tantsary » izay izy no filohany, « Ambatonamelankafatra », sns.
Nodimandry ny alarobia 4 novambra, tao amin’ny clinique Saint Paul Ambatoroka, i Lucien Emmanuel Randrianarivelo. Malagasy andrarezin’ny zavakanto sy kolontsaina malagasy. Tena nahafantarana azy ny tontolon’ny mozika klasika. Antoko mpihira maro no nanovo soa taminy. Fitaovana nanaparitahana ny mozika klasika ny niarahany nanangana tamin’ny ny mpitarika maro ny atao hoe “Mpihiran’ny Fiangonana Fito”, avy tamin’ny fiangonana anglikanina sy protestanta eto an-dRenivohitra Katedraly St. Laurent Ambohimanoro (Lilia Andohasaha), Hanitry ny Saha, Avaratra-Andohalo, Fiadanana Maritiora, Andrainarivo, Ambodivona-Filadelfia, Avaratra-Anjoma, Ankadifotsy FJKM ary ny Symfônika Ratany izay noforonina hahafahan’ny olona rehetra ivelan’ny fiangonana miditra sy mandray anjara. Tao ihany koa ny Amaa, Cast, Akon’ny Finoana…
16 novambra, nindaosin’ny fahafatesana noho ny aretin’ny voa nahazo azy Ratefinanahary Haja na i Doda ao amin’ny tarika Tsiakoraka. Nilalao sy nifehy tanteraka ny folk sy ny country niaraka tamin’ny namany toa an’i Fidy, Gérard, Liva, sns i Doda. Re tamin’ireo resaka nifanaovan’ny mpanakanto sy ny mpitia ny kanto fa ity tarika ity no anisan’ny voalohany tamin’ny filalaovana ny country teto Madagasikara. Nitondra anjara biriky goavana tamin’izany ny talentan’i Doda. Marihina fa anisan’ny mpamoron-kira tao amin’ny tarika Tsiakoraka rahateo izy. Manana mpandimby i Doda satria anisan’ireo mpanakanto manana ny maha izy azy i Jiaary ao amin’ny tarika Moajia.
Nodimandry teo amin’ny faha-30 taony i DJ Bryan. Ny asabotsy 5 desambra, nifatratra tany ambanin’ny taxi-be nanala olona ny môtô nentiny raha niala ilay mpandeha saika hiampita izy, raha ny nambaran’ireo nanatri-maso. Handeha hody ho eny Vatofotsy, avaratry ny tanànan’Antsirabe (tandrifin’ny lycée André Resampa), amin’iny lalana mihazo an’Antananarivo iny Solohajarison Raymond na Haja ho an’ireo namany no tratran’io lozam-pifamoivoizana io.
Manan-talenta amin’ny fikosehana kapila i DJ Bryan. Mpanafana lanonana fanta-daza ao Antsirabe rahateo izy. Haino aman-jery maro no niantso azy noho ny fahaizany manentana. Traka izany koa ireo mpikarakara lanonana goavana. Anisan’ireny ny « THB Tour ». Niara-niasa tamina mpanakanto sy tarika tanora maro izy, noho io talenta goavana ananany io.
Ny alahady 29 novambra, nodimandry teo amin’ny faha-79 taony Ramandason Paul na Paul Dason eo amin’ny sehatry ny hira sy ny famoronan-kira. Raminoson Jérôme Ezekela kosa eo amin’ny sahan’ny haisoratra. Niara-niasa akaiky tamin’i Jéröme Randria (Tarika Ny Railovy) izy nandritra ny taona maro. Efa nihira irery ihany koa i Paul Dason. Andrarezina eo amin’ny asa soratra i Paul Dason. Manamarina izany ireo tononkalo izay zary tonon-kira nohiraina mpanakanto malaza toa an’i Vola sy Noro. Nanakoako ny « Anjavidy », « Very maina », sns. Nanoratra boky maro koa izy. Anisan’ireny ny « Talenta roa » niarahany tamin’i Jeannot Ratsimbazafy, mpanoratra sady poeta namany akaiky. Niompana sy nirona kokoa tamina « surréalisme » ny fomba fanorany. Somary sarotsarotra takarina, raha ny filazan’ireo efa namaky izany.
Nanatontosa : HaRy Razafindrakoto